ADIDY FA TSY ANDRAIKITRA NY FANAOVANA VAKISINY NY ZAZA | Zouboon
ADIDY FA TSY ANDRAIKITRA NY FANAOVANA VAKISINY NY ZAZA
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 9:02
Miaro ny zaza amin’ny aretina mpahazo sy tena mahafaty azy indrindra ny vakisiny. Antoka lehibe ho azy ary tsy azo atao ambanin-javatra amin’ny fahasalamany izany.
Isan-taona dia 1,7 tapitrisa ny zaza matin’ny aretina izay azo sorohina amin’ny alalan’ny fanaovana vaksiny. Miaro ny zaza amin’ny areti-mandoza miteraka fahasembanana na fahafatesana mantsy ny fanaovana vakisiny ara-dalana. Antoka lehibe amin’ny fahasalamany izany. “Zon’ny zaza rehetra ary adidy fa tsy andraikitry ny ray aman-dreny fotsiny ihany ny manao vakisiny ny zanany” hoy Atoa Ramanantsoa Philippe mpitsabo iray. Tokony hatao vaksiny izany ny zaza rehetra na lahy io na vavy. Ny reny bevohoko ihany koa aza dia tokony hanao vakisiny mifanohitra amin’ny tetanosy mba hisorohana izany amin’ny zaza vao hateraka. Marihina fa na zaza marary, na tsy ampy sakafo na koa sembana dia azo atao vakisina ara-dalana tsy misy atahorana.
Raha vao teraka ka mandritra ny sivy volana voalohany dia tsy maintsy atao vakisiny ny zaza. Iarovana azy amin’ny aretina tena mpahazo ny zaza no anton’izany. Fantatra mantsy araka ny fikarohana nataon’ny UNICEF, fa ny antsasaky ny fahafatesana vokatry ny kohadavreny, ny ampahatelon’ny lefakozatra mitranga ary ny ampahaefatry ny fahafatersana avy amin’ny kitrotro dia mahakasika ny zaza latsaky ny heritaona avokoa. Noho izany zava-dehibe loatra ny fanaovana vakisiny ny zaza. Ireo tobim-pahasalamana rehetra eran’ny nosy dia efa manao fanentanana ny ray aman-dreny rehetra amin’ny fanaovana avakisiny ny zanany, tombotsoa ho an’ny fianakaviany koa izany.
“Tsy dia farofy lava aloha ny zanako satria manaraka ireo vakisiny rehetra tokony hatao izy hatramin’izao” hoy I Nirina renin’ny Tanjona zaza vao enim-bolana. Mbola misy anefa ireo ray aman-dreny sasantsasany mihalangalana na tena tsy mivakiloha amin’ny fahasalaman’ny zanany ka tsy mba mampanao vakisiny azy akory. Ilaina izany mba hananany hery fanefitry ny aretina.
Tsy sanatria tsy akory hoe mampitovy ny olona amin’ny biby , fa na ny alika aza mba atao vakisiny mainka fa ny zanaka tiana.